DataRobot: Ihe eji abanye igwe na igwe ihe na choputa | Martech Zone
DataRobot: Ihe eji eme ka igwe na-achoputa ihe
Tuesday, October 24, 2017 Tuesday, October 24, 2017 Douglas Karr
Ọtụtụ afọ gara aga, m ga-eme nnukwu nyocha gbasara ego maka ụlọ ọrụ m iji kwuo ma mmụba ụgwọ nwere ike belata ọrụ ndị ọrụ, ụgwọ ọzụzụ, nrụpụta, yana omume ndị ọrụ zuru oke. M na-echeta na-agba ọsọ na-anwale multiple ụdị nke izu, niile na-ekwubi na a ga-enwe ego. My Director bụ ịrịba Ihọd na gwara m ka m laghachi na-elele ha otu ugboro ọzọ tupu anyị kpebiri ịkụtu ụgwọ maka ole na ole narị ọrụ. M laghachiri ma gbara nọmba ahụ ọzọ… na otu nsonaazụ.
M jere ije Director m. O leliri anya elu wee jụọ, sị, “Would ga-etinye ọrụ gị n'ọrụ a?”… Ọ dị ezigbo mkpa. “Ee.” Anyị mechara bulie ụgwọ kacha nta nke ndị ọrụ anyị yana ego echekwara okpukpu abụọ karịa afọ. Modelsdị m na-ebu amụma azịza ziri ezi, mana ọ ga-apụ na mmetụta zuru oke. N'oge ahụ, nke ahụ bụ ihe kachasị mma m nwere ike ime nyere Microsoft Access na Excel.
A sị na enwere m ike mgbakọ na ike mmụta igwe dị taa, agara m enwe ọsịsa na sekọnd, yana amụma ziri ezi nke ego ga-efu yana mperi pere mpe. DataRobot agaraghị abụ ọrụ ebube.
DataRobot na-arụ ọrụ usoro ndụ niile na-arụ ọrụ, na-enyere ndị ọrụ aka ịmalite ngwa ngwa na ngwa ngwa amụma amụma ziri ezi. Nanị ihe ndị achọrọ bụ ịmata ihe na data - nzuzo na ikike ịmụ ihe igwe bụ nhọrọ zuru oke!
DataRobot bụ ikpo okwu maka Data Science Apprentices, Business Analysts, Data Scientists, Executive, Software Engineers, and IT Professionals to create, nwalee ma melite ụdị data ọsọ ọsọ na mfe. Nke a bụ nyocha vidiyo:
Usoro iji tinye dataRobot dị mfe:
Tinye data gị
Họrọ iche iche
Mee ọtụtụ narị ụdị n'otu pịa
Nyochaa ụdị dị elu ma nweta nghọta
Depụta ihe nlereanya kachasị mma ma mee amụma
Dabere na DataRobot, Uru ha gụnyere:
nke ziri ezi na - Ọ bụ ezie na akpaaka na ọsọ na-abịakarị ụgwọ nke mma, DataRobot na-anapụta na ihu ndị ahụ niile. DataRobot na-enyocha ihe na-akpaghị aka site na ọtụtụ nde ngwakọta nke algọridim, usoro ntinye data, mgbanwe, atụmatụ, na ntinye ntanetị maka ụdị mmụta mmụta igwe kachasị mma maka data gị. Modeldị nke ọ bụla pụrụ iche - a nụziri nke ọma maka usoro data na amụma ebumnuche.
Speed - DataRobot nwere igwe ihe nlere di iche iche nke nwere ike iru otutu ma obu otutu puku sava di ike ichoputa, wuo ma mezie ihe omumu ihe omuma. Nnukwu data? Nchịkọta data zuru ezu? Nsogbu adịghị. Ọsọ na scalability nke ịme ngosi uwe na-ejedebe naanị site na akụ mgbakọ na mkpofu DataRobot. Site n'ike a niile, ọrụ nke were ọnwa were gwụchaa n'ime naanị awa.
Mfe nke iji - Ntanetị a na-arụ ọrụ webụsaịtị na-eme ka onye ọ bụla nwee mmekọrịta na ikpo okwu dị ike, n'agbanyeghị ọkwa ọkwa na ahụmịhe igwe. Ndị ọrụ nwere ike ịdọrọ-na-dobe wee hapụ DataRobot ka ha rụọ ọrụ niile ma ọ bụ na ha nwere ike ide ụdị nke ha maka nyocha site na ikpo okwu. Nlere anya n'ime ya, dị ka Model X-Ray na Njirimara Njirimara, na-enye nghọta miri emi na nghọta ọhụrụ nke azụmahịa gị.
Gburugburu - Ijigide usoro ihe eji eme ihe nke igwe na-amụzi algorithms dịtụbeghị mfe. DataRobot na-agbasawanye usoro ya dị iche iche, algorithms kachasị mma site na R, Python, H20, Spark, na isi mmalite ndị ọzọ, na-enye ndị ọrụ usoro nyocha kachasị mma maka nsogbu ịma aka. Site na ịpị aka nke bọtịnụ mmalite, ndị ọrụ nwere ike itinye usoro ndị ha na-ejitụbeghị na mbụ ma ọ bụ nwere ike ọ gaghịdị amata.
Mbupu Ngwa - Modelsdị amụma kachasị mma enweghị uru ọ bara ma ọ bụrụ na arụ ọrụ ngwa ngwa n'ime azụmaahịa ahụ. Iji DataRobot, ị ga-eji ụdị dọkụmentị mepụta usoro maka amụma. Ọ bụghị naanị nke ahụ, ụdị ọ bụla DataRobot wuru na-ebipụta njedebe REST API, na-eme ka ọ bụrụ ikuku iji jikọta n'ime ngwa ngwa ọgbara ọhụrụ. Ndị na-ahazi nwere ike nweta uru azụmaahịa site na mmụta igwe na nkeji, kama ichere ọnwa ka ha dee koodu akara ma mesoo akụrụngwa dị n'okpuru.
Priselọ ọrụ-ọkwa - Ugbu a ngwa ọrụ igwe na-emetụta ọnụọgụ azụmaahịa na-arịwanye elu, ọ nweghịzị nhọrọ ịgwọ ya dị ka ngwa onye nrụpụta yana obere nchekwa, nzuzo na azụmaahịa azụmaahịa. N'ezie, ọ dị oke mkpa na ikpo okwu maka iwulite na itinye ụdị dị ike, enwere ike ịtụkwasị obi ma jikọta ya na usoro teknụzụ dị n'ime nzukọ.
Hazie Live Demo nke DataRobot
Tags: aiAmamịghe echicheakpaghị aka igwe mmụtaingestion datandokwa datasayensị dataihe onyonyo datadatarobotdatasetịnjirimara atụmatụOboennukwu datangwa igwenlereanya x-rayihe nlereamụmaPythonrỌkụ
Biko azakwala Social Media a rịọ maka .zọ a
Ebumnuche 6 nke Hotels Na-eji Eji Ego ahia Facebook